Mahabharat (2021) (App member only) ##unicode Mahabharat Animကတော့ Indianသမိုင်းကြောင်းရုပ်ရှင်ကို Animationအဖြစ်ပုံဖောက်ထားတဲ့ ကာတွန်းကားဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ မင်းသမီးKuntiဟာ နေနတ်ဘုရားဆီကနေ သားတော်တစ်ပါးတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက် လက်မထပ်ခင်မှာ Karnaဆိုတဲ့ သားတော်တစ်ပါးဖွားမြင်လာခဲ့တယ်။ လက်မထပ်ဘဲကလေးရလာတဲ့အတွက် လူအများကဲ့ရဲ့တာမခံနိုင်တဲ့ မင်းသမီးKuntiဟာ သားတော်Karnaကို ဂင်္ဂါမြစ်ထဲမျှောလိုက်ခဲ့ပြီး‌နောက်မှာ လက်ထပ်ပြီးတော့သားတော်ငါးပါးဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ရှေ့စံမင်းသားရွေးချယ်ပွဲမှာတော့ Kuntiရဲ့သားတော် မင်းသားArjunကို အတော်ဆုံးလေးသမားလို့ လူတွေက သတ်မှတ်ခဲ့ကြပေမဲ့ Karnaဟာ ပြိုင်ပွဲကွင်းထဲရောက်လာပြီးတော့ Arjunနဲ့မြှားပစ်ပြိုင်ဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Arjunဟာ Karnaကို သူ့အကိုအကြီးဆုံးမှန်းမသိတဲ့အတွက်မင်းသားတစ်ပါးက အစေခံတစ်ယောက်နဲ့ မပြိုင်နိုင်ဘူးလို့ ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့် Karnaကိုလူအများဟာကဲ့ရဲ့ခဲ့ကြတယ်။ Arjunတို့နဲ့ နန်းလုဖက်Duryodhanaဟာ Karnaဘက်မှာရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ Karnaဟာ Duryodhanaအတွက် Arjunကိုသတ်ပေးမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဘဲ ထီးနန်းကိုရဖို့အတွက် ညီအကိုတွေဟာ အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ကြဖို ကြံစည်ကြတော့တယ်။Arjunတို့ ညီအကိုငါးယောက်နဲ့ Duryodhanaတို့ ထီးနန်းလုပွဲမှာ ဘယ်သူအနိုင်ရမလဲလို့ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Mahabharat Animကေတာ့ Indianသမိုင္းေၾကာင္း႐ုပ္ရွင္ကို Animationအျဖစ္ပုံေဖာက္ထားတဲ့ ကာတြန္းကားျဖစ္ပါတယ္။ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ မင္းသမီးKuntiဟာ ေနနတ္ဘုရားဆီကေန သားေတာ္တစ္ပါးေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့အတြက္ လက္မထပ္ခင္မွာ Karnaဆိုတဲ့ သားေတာ္တစ္ပါးဖြားျမင္လာခဲ့တယ္။ လက္မထပ္ဘဲကေလးရလာတဲ့အတြက္ လူအမ်ားကဲ့ရဲ႕တာမခံႏိုင္တဲ့ မင္းသမီးKuntiဟာ သားေတာ္Karnaကို ဂဂၤါျမစ္ထဲေမွ်ာလိုက္ခဲ့ၿပီး‌ေနာက္မွာ လက္ထပ္ၿပီးေတာ့သားေတာ္ငါးပါးဖြားျမင္ခဲ့ပါတယ္။ အိမ္ေရွ႕စံမင္းသားေ႐ြးခ်ယ္ပြဲမွာေတာ့ Kuntiရဲ႕သားေတာ္ မင္းသားArjunကို အေတာ္ဆုံးေလးသမားလို႔ လူေတြက သတ္မွတ္ခဲ့ၾကေပမဲ့ Karnaဟာ ၿပိဳင္ပြဲကြင္းထဲေရာက္လာၿပီးေတာ့ Arjunနဲ႔ျမႇားပစ္ၿပိဳင္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့တယ္။ဒါေပမဲ့ Arjunဟာ Karnaကို သူ႔အကိုအႀကီးဆုံးမွန္းမသိတဲ့အတြက္မင္းသားတစ္ပါးက အေစခံတစ္ေယာက္နဲ႔ ...
It Boy (2013) (App member only) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ပြင်သစ်အချစ်ဟာသကားလေးတစ်ကားကိုရွေးချယ်ပေးထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ အဲလစ်ဟာသက်လတ်ပိုင်းအရွယ်ရောက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Rebelle ဆိုတဲ့မဂ္ဂဇင်းတိုက်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ် အဲလစ်ရဲ့သူဌေးဖြစ်သူဟာ အဲလစ်ကိုသမာရိုးကျပုံစံကနေခွဲထွက်ပြီး တက်ကြွသွက်လက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်စေချင်တာပါ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲလစ်တစ်ယောက် ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေး ဘယ်သဇာနဲ့အမှတ်မထင်ဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ် အဲလစ်တစ်ယောက်လူငယ်လေးဖြစ်တဲ့ဘယ်သဇာကိုတွဲပြပြီး သူ့သူဌေးရှေ့မှာထူးခြားတဲ့ပုံစံကိုချပြဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်သဇာကတော့အဲလစ်ကိုတကယ်ချစ်မြတ်နိုးပြီး ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအတူဖြတ်သန်းသွားချင်တဲ့သူပါ အဲလစ်တစ် ယောက် အသက်ထက်ဝက်လောက်ကွာတဲ့ဘယ်သဇာရဲ့အချစ်မှာ အရှုံးပေးလိုက်ရမလား ဘယ်သဇာကိုအသုံးချပြီး ဘဝတက်လမ်းကိုပဲဆုပ်ကိုင်မလားဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ ျပင္သစ္အခ်စ္ဟာသကားေလးတစ္ကားကိုေ႐ြးခ်ယ္ေပးထားပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ အဲလစ္ဟာသက္လတ္ပိုင္းအ႐ြယ္ေရာက္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ Rebelle ဆိုတဲ့မဂၢဇင္းတိုက္မွာအလုပ္လုပ္ပါတယ္ အဲလစ္ရဲ႕သူေဌးျဖစ္သူဟာ အဲလစ္ကိုသမာ႐ိုးက်ပုံစံကေနခြဲထြက္ၿပီး တက္ႂကြသြက္လက္တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစခ်င္တာပါ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာပဲအဲလစ္တစ္ေယာက္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေကာင္ေလး ဘယ္သဇာနဲ႔အမွတ္မထင္ဆုံေတြ႕ခဲ့ပါတယ္ အဲလစ္တစ္ေယာက္လူငယ္ေလးျဖစ္တဲ့ဘယ္သဇာကိုတြဲျပၿပီး သူ႔သူေဌးေရွ႕မွာထူးျခားတဲ့ပုံစံကိုခ်ျပဖို႔ႀကိဳးစားပါေတာ့တယ္ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သဇာကေတာ့အဲလစ္ကိုတကယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၿပီး ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးအတူျဖတ္သန္းသြားခ်င္တဲ့သူပါ အဲလစ္တစ္ ေယာက္ အသက္ထက္ဝက္ေလာက္ကြာတဲ့ဘယ္သဇာရဲ႕အခ်စ္မွာ အရႈံးေပးလိုက္ရမလား ဘယ္သဇာကိုအသုံးခ်ၿပီး ဘဝတက္လမ္းကိုပဲဆုပ္ကိုင္မလားဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 2.5GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Genre : Comedy,Romance Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါင်းရန္ App Link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber – 09691177142
IMDB: 6.4/10 9,288 votes
Saheb Biwi Aur Gangster Returns (2015) (App member only) ##umicode တော်ဝင်မိသားစုတွေကြားကသွေးကြွေးတွေ၊ အာဏာပြိုင်လုမှုတွေနဲ့အတူ Gangster အပိုင်းနှစ် တဖန်ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ဒီအပိုင်းမှာတော့ မင်းမျိုးမင်းနွယ်က ဆင်းသက်လာသူဖြစ်တဲ့ အာဒစ်ရာပရာတပ်ဆင်းဟာ သေနတ်ဒဏ်ရာကြောင့် အောက်ပိုင်းသေသွားပြီး ဇနီးဖြစ်သူ မတ်ဟီဒေဝီရဲ့ လူမှုရေးပေါက်ပြန်မှုများကို ခံစားနေရပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးကြားက ဆက်ဆံရေးဟာ ပြန်ဆက်လို့မရအောင် ပျက်စီးနေခဲ့ပြီး ဝန်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့ မတ်ဟီဒေဝီဟာ ပိုက်ဆံပိုက်ဆံလို့မြည်နေအောင်ကို ငွေမက်တဲ့အကျင့်ပျက်ခြစားသူ ဝန်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ အာဒစ်ရာပရာတပ်ဆင်းလိုဘဲ မင်းမျိုးမင်းနွယ်က ဆင်းသက်လာတဲ့ အင်ဒါဂျက်ဆင်းဟာ ဝန်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်လာရမယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိသူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါကြောင့် သူ့ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်လာမှ သူချစ်ရတဲ့ ချစ်သူလေး ရန်ဂျနာနဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေး တည်ဆောက်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ကံကြမ္မာမုန်တိုင်းဆိုတာ ဝင်လာတတ်စမြဲမို့ လက်ရှိမိန်းမကို စိတ်ကုန်နေတဲ့ အာဒစ်ရာပရာတပ်ဆင်းဟာ ယုတ်မာတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ရန်ဂျနာကိုသိမ်းပိုက်ပြီး ဒုတိယမိန်းမထပ်ယူလိုက်ပါတော့တယ်။ ဘိုးဘေဘီဘင်တွေလက်ထပ်ကတည်းက အာဒစ်ရာပရာတပ်ဆင်းတို့မျိုးရိုးနဲ့ ရန်ငြိုးရန်စတွေရှိခဲ့တဲ့ အင်ဒါဂျက်ဆင်းဟာ သူချစ်ရတဲ့ ချစ်သူရန်ဂျနာကိုပါ ထပ်ပြီးဆုံးရှုံးလိုက်ရတော့ ဘယ်လိုအငြိုးတွေနဲ့ တုန့်ပြန်မလဲဆိုတာကို ဇာတ်လမ်းထဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ ဆက်ပြီးရှုစားပေးပါ။ အညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူ Chris ဖြစ်ပါတယ်။ ##zawgyi ေတာ္ဝင္မိသားစုေတြၾကားကေသြးေႂကြးေတြ၊ အာဏာၿပိဳင္လုမႈေတြနဲ႔အတူ Gangster အပိုင္းႏွစ္ တဖန္ျပန္ေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ။ ဒီအပိုင္းမွာေတာ့ မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္က ဆင္းသက္လာသူျဖစ္တဲ့ အာဒစ္ရာပရာတပ္ဆင္းဟာ ...
IMDB: 6.8/10 3,925 votes
Saheb Biwi Aur Gangster Returns (2015)
I Spit on Your Grave2(2013) (App member only) ##umicode Katie ဟာ သူမရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အတွက် ပုံအသစ်ရိုက်ဖိုဆိုပြီး ဓာတ်ပုံဆရာတစ်စုနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ် သူမဟာ အဲဒီဓာတ်ပုံဆရာတွေဆီ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖိုသွားတဲ့နေ့မှာပဲ အဆင်မပြေမှုလေးတွေရှိခဲ့ပြီး ဓာတ်ပုံတောင်ပြီးအောင် မရိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘဲပြန်လာခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် အဲဒီကိစ္စဟာ အဲဒီနေရာမှာတင်ပြီးမသွားဘဲ ယုတ်မာရက်စက်လွန်းလှတဲ့ မုဒိမ်းကျင့် လူသတ်အလောင်းဖျောက်မှုထိဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် Katie ဟာ ထိုသူတွေလက်ထဲကနေ တစ်ကြိမ်လွတ်မြောက်ဖို ကြိုးစားအောင်မြင်ခဲ့ပါသေးတယ် ဒါပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းစဉ်ပြီး ပြန်အဖမ်းခံရ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ပြီး အနှိပ်စက်ခံရပါတယ် Katie ရဲ့ ကြောက်ရွံမှု နာကြည်းမှုတွေနဲ့အတူ လက်စားပြန်ချေနိုင်ခဲ့တဲ့အခါမှာလည်း သူမ ခံစားခဲ့ရသလို အသေးစိတ်ကို တစ်ဆင့်ချင်းဆီ တစ်ယောက်စီတိုင်းကို ရေရေလည်လည် ရက်ရက်စက်စက်ကို ပြန်လုပ်ပါတယ် ဒီကားဟာဆိုရင် Horror/Thriller ကားဖြစ်တာနဲ့အညီ သွေးသံရဲရဲ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်မှုတွေပါဝင်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာလှည့်ကွက်တွေလည်းပါတာမလို ဒါမျိုးဇာတ်အိမ်ကြည့်ရတာ ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆို တကယ်စိတ်ကျေနပ်စေမှာပါ (Rape ခန်း 18+ တွေပါလို့ မိသားစုနဲ့တူတူမကြည့်သင့်ပါဘူး ) ##zawgyi Katie ဟာ သူမရဲ႕ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အတြက္ ပုံအသစ္႐ိုက္ဖိုဆိုၿပီး ဓာတ္ပုံဆရာတစ္စုနဲ႔ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္ သူမဟာ အဲဒီဓာတ္ပုံဆရာေတြဆီ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ဖိုသြားတဲ့ေန႔မွာပဲ အဆင္မေျပမႈေလးေတြရွိခဲ့ၿပီး ဓာတ္ပုံေတာင္ၿပီးေအာင္ မ႐ိုက္ျဖစ္ခဲ့ဘဲျပန္လာခဲ့ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ အဲဒီကိစၥဟာ အဲဒီေနရာမွာတင္ၿပီးမသြားဘဲ ယုတ္မာရက္စက္လြန္းလွတဲ့ မုဒိမ္းက်င့္ လူသတ္အေလာင္းေဖ်ာက္မႈထိျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္ Katie ...
IMDB: 5.7/10 28,335 votes
Hakuoki – Demon of the Fleeting Blossom – Wild Dance of Kyoto ##unicode ဒီဇာတ်ကားကတော့ Hakuouki: Shinsengumi Kitan anime series ကိုအခြေခံပြီး movieပြန်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒီanime movieကတော့ အပိုင်း၁ပါ Hakuoki gamesတွေ animeတွေကတော့ အမြဲအရည်အသွေးအပြည့်ပါပဲ series မကြည့်ထားရသေးလည်း ဒီဇာတ်ကားကြည့်တာနဲ့တင် စိတ်ဝင်စားသွားမှာပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ အဖေကိုရှာဖို့ မြို့တော်ကိုထွက်လာခဲ့တဲ့ Chinzuruတစ်ယောက် Shinsengumiအဖွဲ့ဆီကိုရောက်သွားပါတယ် သူ့အဖေကိုလိုက်ရှာရင်း Shinsengumiတပ်သားတွေနဲ့အတူ စွန့်စားခန်းတွေဘယ်လိုကြုံရမလဲ Chinzuruကိုဝိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ သူတို့ကြားကသံယောဇဉ်တွေနဲ့ လူသားတွေနဲ့နတ်ဆိုးတွေကြား အားပြိုင်မှုတွေကို ကြည့်ရူရမယ့် animeဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်လို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ Hakuouki: Shinsengumi Kitan anime series ကိုအေျခခံၿပီး movieျပန္ဖန္တီးထားတာျဖစ္ပါတယ္ ဒီanime movieကေတာ့ အပိုင္း၁ပါ Hakuoki gamesေတြ animeေတြကေတာ့ အၿမဲအရည္အေသြးအျပည့္ပါပဲ series မၾကည့္ထားရေသးလည္း ဒီဇာတ္ကားၾကည့္တာနဲ႔တင္ စိတ္ဝင္စားသြားမွာပါ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ အေဖကိုရွာဖို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုထြက္လာခဲ့တဲ့ Chinzuruတစ္ေယာက္ Shinsengumiအဖြဲ႕ဆီကိုေရာက္သြားပါတယ္ သူ႔အေဖကိုလိုက္ရွာရင္း Shinsengumiတပ္သားေတြနဲ႔အတူ စြန္႔စားခန္းေတြဘယ္လိုႀကဳံရမလဲ Chinzuruကိုဝိုင္းဝန္းေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ သူတို႔ၾကားကသံေယာဇဥ္ေတြနဲ႔ လူသားေတြနဲ႔နတ္ဆိုးေတြၾကား အားၿပိဳင္မႈေတြကို ၾကည့္႐ူရမယ့္ animeဇာတ္ကားေကာင္းျဖစ္လို႔ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ Review – Hmue File Size – 1.3GB Format…mp4 Quality ...
IMDB: 7.0/10 91 votes
An Ethics Lesson (2013) ##unicode An ethics Lessonsဇာတ်ကားမှာတော့ Jin naဆိုတဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ဟာ သူမတိုက်ခန်းမှာဘဲ အသတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ ရဲတွေအလောင်းစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါ သူမခန္ဓာကိုယ်ကနေ ပရော်ဖက်ဆာ Kim Soo Taekရဲ့သုတ်ရည်ထွက်လာတာကြောင့် ရဲတွေကပရော်ဖက်ဆာကို တရားခံလို့ဘဲထင်ကာဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ တကယ့်တရားခံအစစ်ကိုတော့ Jin na ဘေးအိမ်မှာနေတဲ့ Jung hoonဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဘဲသိနေခဲ့တယ်။Jang hoonက Jin naဘေးအိမ်မှာနေကာ Jin naအိမ်မှာ အသံဖမ်းစစ်တွေ ကင်မရာတွေ တပ်ကာ Jin naရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတိုင်းကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ Jin naအသတ်ခံရတဲ့ညမှာလဲ Jung hoonတစ်ယောက် Jin naလှုပ်ရှားမှုတွေကို အရင်လိုဘဲစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ Jin naကို ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သူ Park Hyun sooသတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကို Jung hoonတစ်ယောက်သိနေပေမဲ့လဲ ရဲကိုတိုင်ကြားပါ့မလား။ဒီအမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဒီယောကျာ်းတွေကြား ဘယ်လိုအရှုပ်အထွေးပေါ်လာမလဲဆိုတာကို ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi An ethics Lessonsဇာတ္ကားမွာေတာ့ Jin naဆိုတဲ့ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူေလးတစ္ေယာက္ဟာ သူမတိုက္ခန္းမွာဘဲ အသတ္ခံလိုက္ရပါတယ္။ ရဲေတြအေလာင္းစစ္ေဆးလိုက္တဲ့အခါ သူမခႏၶာကိုယ္ကေန ပေရာ္ဖက္ဆာ Kim Soo Taekရဲ႕သုတ္ရည္ထြက္လာတာေၾကာင့္ ရဲေတြကပေရာ္ဖက္ဆာကို တရားခံလို႔ဘဲထင္ကာဖမ္းဆီးသြားခဲ့တယ္။ဒါေပမဲ့ တကယ့္တရားခံအစစ္ကိုေတာ့ Jin ...
Man on the Edge (2013) ##unicode ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ကားလေးကတော့ ၂၀၁၃ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် Main Lead ဖြစ်တဲ့ မင်းသား Park Shin Yang ဟာဆိုရင်လဲ အခုတော့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေမလုပ်တော့ပေမယ့် တခေတ်တခါ ကတယ်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားတစ်လက်ပါ။ ကဲ ဇာတ်ကြောင်းလေး အမြည်းနည်းနည်းပေးမယ်နော် ပတ်ကွမ်ဟို ဆိုသူက နာမည်ကြီးဂိုဏ်းစတာတစ်ခုရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်သူရဲ့ ညာလက်ရုံးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ရက်မှာ ထိခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့် လက်ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရာခဲ့ပြီး အဲဒီနောက်မှာ တိုက်ဆိုက်မှုလေးတွေရှိခဲ့လို့ ဗေဒင်သွားမေးခဲ့ပါတယ်။ ဗေဒင်ဆရာမက သူ့ဘဝကြီးလုံးဝပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲလိုပြောပြီးမကြာပါဘူး။ သူ့ဆီမှာထူးခြားမှုတွေပေါင်းစုံဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာ‌ကိုမသိနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့သူဖြေရှင်းဖို့ ဘယ်လိုလမ်းကိုရွေးချယ်လိုက်လဲ လုံးဝကိုကြမ်းရမ်းတဲ့ ဖိုက်တာဘဲကြီး နောက်ဆုံးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတာကို ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ကြပါဦးရှင့် ##zawgyi ခုတင္ဆက္ေပးမယ့္ကားေလးကေတာ့ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ကထြက္ရွိထားတဲ့ ဇာတ္ကားေကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္ Main Lead ျဖစ္တဲ့ မင္းသား Park Shin Yang ဟာဆိုရင္လဲ အခုေတာ့ အႏုပညာလုပ္ငန္းေတြမလုပ္ေတာ့ေပမယ့္ တေခတ္တခါ ကတယ္ကိုေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ မင္းသားတစ္လက္ပါ။ ကဲ ဇာတ္ေၾကာင္းေလး အျမည္းနည္းနည္းေပးမယ္ေနာ္ ပတ္ကြမ္ဟို ဆိုသူက နာမည္ႀကီးဂိုဏ္းစတာတစ္ခုရဲ႕ ဥကၠဌျဖစ္သူရဲ႕ ညာလက္႐ုံးျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ရက္မွာ ထိခိုက္မႈတစ္ခုေၾကာင့္ လက္ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရာခဲ့ၿပီး အဲဒီေနာက္မွာ တိုက္ဆိုက္မႈေလးေတြရွိခဲ့လို႔ ေဗဒင္သြားေမးခဲ့ပါတယ္။ ေဗဒင္ဆရာမက သူ႔ဘ၀ႀကီးလုံး၀ေျပာင္းလဲသြားမယ္လို႔ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲလိုေျပာၿပီးမၾကာပါဘူး။ သူ႔ဆီမွာထူးျခားမႈေတြေပါင္းစုံျဖစ္ၿပီး ဘယ္လိုေျဖရွင္းရမလဲဆိုတာ‌ကိုမသိႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ေနာက္ေတာ့သူေျဖရွင္းဖို႔ ဘယ္လိုလမ္းကိုေ႐ြးခ်ယ္လိုက္လဲ လုံး၀ကိုၾကမ္းရမ္းတဲ့ ဖိုက္တာဘဲႀကီး ေနာက္ဆုံးဘယ္လိုျဖစ္သြားလဲဆိုတာကို ...
IMDB: 6.2/10 198 votes
Shootout at Wadala (2013) ##unicode အိန္ဒိယရဲ့ ဒုစရိုက်သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘုံဘေ မြို့(ယခုအခေါ် မွမ်ဘိုင်းမြို့)ဟာ သိပ်ကို အရှုပ်ထွေးဆုံးပါပဲ....ဂိုဏ်းတွေအချင်းချင်းပြိုင်ဆိုင်သတ်ဖြတ်ကြတာတွေ... နည်းနည်းလေးမှ သေးသေးတင်မခံတဲ့ ဂိုဏ်းစတားတွေကြောင့် လူသတ်ပွဲဆိုတာတွေ မမြင်ချင်မှအဆုံးပါပဲ.. .နောက်ပြီးရဲတွေဆိုတာ အဲ့ဒီခေတ်မှာ အရာမရောက်ခဲ့ကြဘူး...အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆို ဘောင်မဝင်ကြဘူးပေါ့ဗျာ..ရဲတစ်ယောက်က လူမိုက်တစ်ယောက်ကို သွားဖမ်းဖို့ ဆိုရင် ဝရမ်းပါမှ ရမယ်တို့ မျက်မြင်သက်သေရှိလားတို့နဲ့ ရဲတွေဟာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ကြတယ်.. အကယ်၍မျက်မြင်သက်သေရှိနေတယ်ဆိုရင်တောင် ဂိုဏ်းတွေကို ကြောက်ကြတဲ့အတွက် ဘယ်သူကမှ သက်သေမထွက်ဆိုရဲကြဘူး...အဲ့လိုနဲ့ ရဲတွေရဲ့ သိက္ခာဟာထိုခေတ်ထိုအချိန်က ဟိုးအောက်ဆုံးထိ ရောက်ခဲ့ရတယ်... အဲ့ဒီအချိန်မှာအဓိကဇာတ်ဆောင် မင်းသားက ရိုးရိုးကုတ်ကုတ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ပဲ ရှိသေးတာပေါ့ ...ပထွေးရဲ့နှိပ်စက်ခံရတဲ့ဘဝကနေ ရုန်းထွက်ဖို့အတွက် စာကိုကြိုးစားနေရင်းကနေ ပထွေးရဲ့သားဖြစ်သူသူ့အကိုလူမိုက်ကို ကယ်ခဲ့လို့ လူသတ်မှု ကြံရာအဖြစ်ထောင်ကျခဲ့ရတယ်... အဲ့လိုနဲ့ အညွှန့်တလူလူတက်နေတဲ့ သူ့ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ လာဘ်စားတဲ့ရဲတစ်ယောက်ကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရတယ် .. အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးရဲတွေကို သူမုန်းတီးသွားပြီး ထောင်က ထွက်ပြေးတဲ့အခါ ဂိုဏ်းထောင်ပြီး ရဲတွေကို ဒုက္ခပေးတော့တယ်.... ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့ သူဟာ တစ်ခြားဂိုဏ်းတွေနဲ့ ကတောက်ကဆလည်းဖြစ် ရဲတွေနဲ့လည်းမတည့် အဲ့လိုနဲ့ ဒုစရိုက်လောကမှာ ရပ်တည်လာခဲ့ရင်း သူ့ကို ဘယ်သူတွေက သတ်ဖို့ကြံစည်လာမှာလဲဆိုတာ အားလုံးလဲ သိချင်နေလောက်ပြီထင်ပါတယ်....ဇာတ်လမ်းထဲမှာ အဖြေကို ...
IMDB: 5.9/10 5,776 votes
Concrete Blondes (2013) ##unicode Concrete Blondesဇာတ်ကားမှာတော့ Krisက အသုံးအဖြုန်းကြီးတဲ့ သူမရဲ့ရည်းစား Taraကြောင့် စိတ်ညစ်နေရသူဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ဌားခအခက်အခဲကြောင့် အိမ်မှာ သူမတို့နှစ်ယောက်အပြင် ပြသာနာတွေအမြဲလုပ်တတ်တဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်ကောင်မလေး Sammiနဲ့ အတူနေနေရတာပါ။ Sammiက အိမ်ကို သူ့ရည်းစား Karlကိုခေါ်လာပြီး အတူနေတတ်တာကြောင့် Krisအတွက်တော့ Sammiကပြသာနာအိုးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ Taraနဲ့ Sammiတို့နှစ်ယောက် ကနေဒါဒေါ်လာတွေပြည့်နေတဲ့ အိတ်တစ်အိတ်ကို အိမ်ကိုယူလာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့အိတ်ကို လိုက်ရှာမဲ့လူတွေ ရှိလာရင် သူတို့ယူလာမှန်းမသိအောင် ဝှက်ထားဖို့သုံးယောက်သား သဘောတူညီလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Krisတစ်ယောက်က ပြသာနာအိုး Sammiကို မယုံကြည်သလို Sammiကလဲ Krisကို မယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။အချင်းချင်းမယုံကြည်ကြတဲ့ သူတို့သုံးယောက် ဒီပိုက်ဆံတွေကိုယူပြီးတော့ အဲ့မြို့ကထွက်သွားနိုင်ပါ့မလား။ Krisနဲ့Taraတို့ကြားက ဆက်ဆံရေးကရော ဒီငွေတွေကြောင့် ပျက်စီးသွားမလားဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Concrete Blondesဇာတ္ကားမွာေတာ့ Krisက အသုံးအၿဖဳန္းႀကီးတဲ့ သူမရဲ႕ရည္းစား Taraေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနရသူျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ဌားခအခက္အခဲေၾကာင့္ အိမ္မွာ သူမတို႔ႏွစ္ေယာက္အျပင္ ျပသာနာေတြအၿမဲလုပ္တတ္တဲ့ ခပ္မိုက္မိုက္ေကာင္မေလး Sammiနဲ႔ အတူေနေနရတာပါ။ Sammiက အိမ္ကို သူ႔ရည္းစား Karlကိုေခၚလာၿပီး အတူေနတတ္တာေၾကာင့္ Krisအတြက္ေတာ့ Sammiကျပသာနာအိုးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ Taraနဲ႔ Sammiတို႔ႏွစ္ေယာက္ ကေနဒါေဒၚလာေတြျပည့္ေနတဲ့ ...
IMDB: 4.8/10 619 votes
The Legend Makers (2013) ##unicode The Legend Makers ဇာတ်ကားကတော့ ဗီယက်နမ်စစ်ကားတစ်ကားပါ။ဒီဇာတ်ကားက 1960တုန်းက အမေရိကန်နဲ့ဗီယက်နမ်စစ်ပွဒအကြောင်းရိုက်ပြထားတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်တွေရဲ့စစ်လက်နက်အသစ်တွေ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် ဗီယက်နမ်တွေအထိနာနေချိန်မှာ အမျိုးသား အမျိုးသမီးမကျန် စစ်ထဲသို့ဝင်ကာ နိုင်ငံအတွက် အသက်စွန့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးလေးတွေကလဲ လူငယ်စေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ကာ ကိုယ့်ရွာကိုယ်ကာကွယ်ခဲ့ရတယ်။တောင်ပိုင်း တိုက်ပွဲက ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှ ဗီယက်နမ်စစ်တပ်တွေမှာ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပြတ်လပ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဓိကအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာကတော့ လောင်စာဆီတွေဘဲဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ကြီး Dinhရဲ့ အမိန့်အရ 1968ကနေ 1975အထိ ၇နှစ်တိုင်တိုင် တပ်သားတွေက အခက်တွေကိုဖြတ်ကျော်ကာ အန္တရာယ်တွေကြားကနေ ၅၀၀၀ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ လောင်စာဆီသယ်ယူတဲ့ပိုက်လိုင်းတွေကို မြောက်ပိုင်းကနေ တောင်ပိုင်းအထိ တည်ဆောက်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ စစ်ပွဲအတွင်းက ပြည်သူတွေနဲ့ စစ်သားတွေဘယ်လိုရုန်းကန်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi The Legend Makers ဇာတ္ကားကေတာ့ ဗီယက္နမ္စစ္ကားတစ္ကားပါ။ဒီဇာတ္ကားက 1960တုန္းက အေမရိကန္နဲ႔ဗီယက္နမ္စစ္ပြဒအေၾကာင္း႐ိုက္ျပထားတဲ့ကားျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ေတြရဲ႕စစ္လက္နက္အသစ္ေတြ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈေတြေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္ေတြအထိနာေနခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးမက်န္ စစ္ထဲသို႔ဝင္ကာ ႏိုင္ငံအတြက္ အသက္စြန္႔တိုက္ခိုက္ခဲ့ရတယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အမ်ိိုးသမီးေလးေတြကလဲ လူငယ္ေစတနာဝန္ထမ္းအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ကာ ကိုယ့္႐ြာကိုယ္ကာကြယ္ခဲ့ရတယ္။ေတာင္ပိုင္း တိုက္ပြဲက ျပင္းထန္လာတာနဲ႔အမွ် ဗီယက္နမ္စစ္တပ္ေတြမွာ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းေတြျပတ္လပ္လာခဲ့ပါတယ္။ အဓိကအေရးတႀကီးလိုအပ္ေနတာကေတာ့ ေလာင္စာဆီေတြဘဲျဖစ္ျပီး ဗိုလ္ႀကီး Dinhရဲ႕ အမိန္႔အရ 1968ကေန 1975အထိ ၇ႏွစ္တိုင္တိုင္ တပ္သားေတြက အခက္ေတြကိုျဖတ္ေက်ာ္ကာ အႏၲရာယ္ေတြၾကားကေန ၅၀၀၀ကီလိုမီတာရွည္လ်ားတဲ့ ေလာင္စာဆီသယ္ယူတဲ့ပိုက္လိုင္းေတြကို ေျမာက္ပိုင္းကေန ေတာင္ပိုင္းအထိ ...
Witching & Bitching (2013) ##unicode ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ကားကတော့ ထူးထူးခြားခြား စပိန်စုန်းမကားလေးပါ။ ဂျိုးဖာနန်ဒတ်ဟာ အိမ်ထောင်ကွဲအမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် သူဟာရတနာဆိုင်တစ်ခုကို ခုမှမြင်ဖူးတွေ့ဖူးသူ တွေနဲ့ ဓါးပြတိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ဒါပေမယ့် အဲဒီနေ့ဟာ သူ့သား ဆာဂျီရိုကို ထိန်းကျောင်းပေးရမယ့်နေ့ဖြစ်နေတယ် ဒီလိုနဲ့ ဆာဂျီရိုလေးလဲ သူ့အဖေဓါးပြတိုက်တဲ့နောက် ကန့်လန့်ကန့်လန့်နဲ့ ပါသွားရှာတယ် နောက်ကရဲတွေလိုက်တာကြောင့် သူတို့လဲပြေးရင်း ပြင်သစ်ဘက်ကိုပြေးဖို့ကြံပါတော့တယ် ဒီလိုနဲ့ နယ်စပ်က ရွာလေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ကားမောင်းတဲ့သူက အဲဒီရွာက စုန်းမတွေနေတဲ့‌ရွာဖြစ်ကြောင်းသတိပေးပေမယ့် ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တာကြောင့် ရွာထဲဝင်ရပါတော့တယ် တကယ်ပဲ အဲဒီရွာထဲမှာ စုန်းတွေရှိနေတော့ ဆာဂျီရိုတို့သားအဖ ဘယ်လိုတွေကြုံတွေရမလဲဆိုတာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦးရှင့် ##zawgyi ခုတင္ဆက္ေပးမယ့္ကားကေတာ့ ထူးထူးျခားျခား စပိန္စုန္းမကားေလးပါ။ ဂ်ိဳးဖာနန္ဒတ္ဟာ အိမ္ေထာင္ကြဲအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္ သူဟာရတနာဆိုင္တစ္ခုကို ခုမွျမင္ဖူးေတြ႕ဖူးသူ ေတြနဲ႔ ဓါးျပတိုက္ဖို႔ဆုံးျဖတ္လိုက္တယ္ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေန႔ဟာ သူ႔သား ဆာဂ်ီ႐ိုကို ထိန္းေက်ာင္းေပးရမယ့္ေန႔ျဖစ္ေနတယ္ ဒီလိုနဲ႔ ဆာဂ်ီ႐ိုေလးလဲ သူ႔အေဖဓါးျပတိုက္တဲ့ေနာက္ ကန႔္လန႔္ကန႔္လန႔္နဲ႔ ပါသြားရွာတယ္ ေနာက္ကရဲေတြလိုက္တာေၾကာင့္ သူတို႔လဲေျပးရင္း ျပင္သစ္ဘက္ကိုေျပးဖို႔ႀကံပါေတာ့တယ္ ဒီလိုနဲ႔ နယ္စပ္က ႐ြာေလးကိုေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ကားေမာင္းတဲ့သူက အဲဒီ႐ြာက စုန္းမေတြေနတဲ့‌႐ြာျဖစ္ေၾကာင္းသတိေပးေပမယ့္ ဘယ္လိုမွမတတ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ႐ြာထဲ၀င္ရပါေတာ့တယ္ တကယ္ပဲ အဲဒီ႐ြာထဲမွာ စုန္းေတြရွိေနေတာ့ ဆာဂ်ီ႐ိုတို႔သားအဖ ဘယ္လိုေတြႀကဳံေတြရမလဲဆိုတာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေစာင့္ၾကည့္လိုက္ပါဦးရွင့္ Review – ACP File Size ...
IMDB: 6.4/10 13,223 votes
IMDB: 8.3/10 29,541 votes
Cloudy withaChance of Meatballs2(2013) ##unicode Cloudy withachance of meatballs 2ဇာတ်ကားမှာတော့ ပထမဆုံး ကားမှာ Flintတစ်ယောက် သူ့ရဲ့စက်ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ တစ်မြို့လုံးကို ကယ်တင်လိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ ဒီကားမှာတော့ မြို့ကို ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ အစားအသောက်အကြီးကြီးတွေကို ရှင်းလင်းဖို့ သိပ္ပံပညာရှင် Chester Vနဲ့သူ့အဖွဲ့က ကျွန်းကိုရောက်လာပြီး ကျွန်းကို ရှင်းလင်းပြီးရင် ပြန်လည်ဆက်သွယ်မယ်လို့ ကတိပေးပြီး ကျွန်းကမြို့သူမြို့သားတွေကို ထွက်သွားခိုင်းပါတယ်။ Chester Vက Flintကိုလဲ သူ့ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လာလုပ်ဖို့လဲ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ Chester Vက Flintရဲ့ ဟိးရိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် Flintက ဒီကမ်းလှမ်းမှုကို လက်ခံပြီး သူမိသားစု သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ကျွန်းကဘထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ Chester Vက ကျွန်းမှာရှိနေတဲ့ အသက်ဝင်နေတဲ့ အစားအစာမကောင်းဆိုးဝါးတွေက သူ့အဖွဲ့သားတွေကို တိုက်ခိုက်လိုက်တာမို့ ကူညီပေးဖို့ Flintကို ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။ Flintတစ်ယောက် သူတီထွင်ထားတဲ့ စက်ကို နောက်တစ်ခါပြန်ပိတ်ဖို့အတွက် သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ အန္တရာယ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ ကျွန်းကို သွားရပါတော့တယ်။ Flintတစ်ယောက် အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ သူ့စက်ကို ပြန်ပိတ်နိုင်မလား။ သူ့ဟီးရိုး Chester Vကရော လူကောင်းတစ်ယောက်ဟုတ်ပါ့မလားဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါအုံး ##zawgyi Cloudy ...
IMDB: 6.4/10 88,943 votes
The Wrath Of Vajra (2013) ##unicode ဒီတစ်ခါတော့ martial arts ကောင်းကောင်း ခံစားချင်တဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် သိုင်းကွက်လန်းလန်းတွေနဲ့ ဇာတ်ကားလေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်... ဇာတ်လမ်းက... ဂျပန်တွေရဲ့ မရဏနယ်မြေ ဆိုတဲ့ဂိုဏ်းက စစ်ရှုံးတဲ့နိုင်ငံက ဆင်းရဲတဲ့ကလေးတွေကို ဖမ်းဆီးပြီး လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သူတွေအဖြစ်လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ နေရာတစ်ခုပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ ဂျပန်စစ်တပ်နဲ့ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့ ဂိုဏ်းကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရတယ်၊ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဂျပန်တော်ဝင်မင်းသားရဲ့အမိန်နဲ့ ဂိုဏ်းကိုပြန်တည်ထောင်ခွင့်ရသွားတဲ့အခါ ရှောင်လင်ကျောင်းက ကလေးတွေကို အတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပါတော့တယ်။ ရှောင်လင်ဂိုဏ်းက ဟူကျစ်ဆိုတဲ့သူက ကလေးတွေကိုလိုက်ပြီး ကယ်ဆယ်တဲ့အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။ သူက မရဏနယ်မြေရဲ့ ဂိုဏ်းသားတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမလဲ ကြည့်လိုက်ကြပါဦး ##zawgyi ဒီတစ္ခါေတာ့ martial arts ေကာင္းေကာင္း ခံစားခ်င္တဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ သိုင္းကြက္လန္းလန္းေတြနဲ႔ ဇာတ္ကားေလးတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္... ဇာတ္လမ္းက... ဂ်ပန္ေတြရဲ႕ မရဏနယ္ေျမ ဆိုတဲ့ဂိုဏ္းက စစ္ရႈံးတဲ့ႏိုင္ငံက ဆင္းရဲတဲ့​ကေလးေတြကို ဖမ္းဆီးၿပီး လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္သူေတြအျဖစ္ေလ့က်င့္ေပးတဲ့ ေနရာတစ္ခုေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္းမွာ ဂ်ပန္စစ္တပ္နဲ႔ သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္လို႔ ဂိုဏ္းကိုဖ်က္သိမ္းလိုက္ရတယ္၊ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဂ်ပန္ေတာ္ဝင္မင္းသားရဲ႕အမိန္နဲ႔ ဂိုဏ္းကိုျပန္တည္ေထာင္ခြင့္ရသြားတဲ့အခါ ေရွာင္လင္ေက်ာင္းက ကေလးေတြကို အတင္းအဓမၼဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ပါေတာ့တယ္။ ေရွာင္လင္ဂိုဏ္းက ဟူက်စ္ဆိုတဲ့သူက ကေလးေတြကိုလိုက္ၿပီး ကယ္ဆယ္တဲ့အေၾကာင္းကို ႐ိုက္ကူးထားတာပါ။ သူက မရဏနယ္ေျမရဲ႕ ...
The Art of the Steal ကျွန်တော်တို့ဟာ မကောင်းမှုကို အားပေးတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ အမိုက်စား ဘဏ်ဓားပြကားတွေ၊ သူခိုးကားတွေဆိုရင်တော့ အရမ်းသဘောကျတယ်…ဘာလို့ဆိုဒီလိုကားတွေဟာ အချက်အလက်တွေများစွာ အသုံးပြုရသလို ခေတ်မှီနည်းပညာတွေနဲ့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဇာတ်လမ်းအစမှအဆုံးထိ စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်မှုပေးနိုင်လွန်းလို့ဖြစ်တယ်… ဒီကားထဲမှာလည်း တကယ့်အချီကြီးတွေကိုမှ ခိုးကြလိမ်ကြတာ…ညီအကို(၂)ယောက်ဉီးဆောင်ပြီး အဖွဲ့လေးတစ်ဖွဲ့ရှိတယ်..အချီကြီးတွေမှ သမတာ…ကျွမ်းကျင်မှုကိုယ်စီရှိသလို အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေလည်းရှိတယ်… အကိုဖြစ်သူဟာ ခိုးမှုကြောင့်ပဲ ထောင်(၁၀)နှစ်ကျသွားတယ်…အကျင့်တွေပြင်အောင်ထောင်ထဲထည့်လိုက်ပေမဲ့ ထောင်ကထွက်လာပြီးနောက် အချီကြီးပွပေါက်တစ်ခုထပ်တွေ့တဲ့အခါမှာတော့… သူတို့ ဘယ်လိုဆရာကျကျ ခိုးကြမလဲဆိုတာကိုတော့…
IMDB: 6.3/10 23,019 votes
The Host ကမ္ဘာမြေကြီးဟာ ငြိမ်းချမ်းနေလို့နေပါတယ် ဆာလောင်ငတ်မွတ်မှုတွေမရှိသလို.. အကြမ်းဖက်မှုတွေလည်း မရှိကြပါဘူး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဟာလည်း ပြန်လည်နာလန်ထလာပြီး ရိုးသားမှု ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အကြင်နာတရားတွေကို ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျင့်သုံးကြပါတယ်… ကမ္ဘာကြီးက ဒီလောက်တစ်ခါမှမပြည့်စုံဖူးဘူးတဲ့ ပြည့်စုံမှုမျိုးနဲ့ပြည့်စုံလို့နေတယ် တစ်ခုပါပဲ..လူသားတွေရဲ့ ကမ္ဘာကြီးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဂြိုဟ်သားတွေ ကျူးကျော်တာခံခဲ့ရတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာ လူသားတွေဟာ မျိုးသုဉ်းလုနီးနီးဖြစ်နေပြီး ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့ လူသားအနည်းစုဟာတော့ပြေးလွှားပုန်းရှောင်နေကြရတယ်.. ။ ဒီလူနည်းစုထဲကမှ မယ်လနီဆိုတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ တစ်ရက်မှာ ဂြိုဟ်သားတွေရဲ့လက်ထဲကျရောက်သွားပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရာ တခြားဂြိုဟ်တစ်ခုက ကပ်ပါးသက်ရှိတစ်ခုထည့်ပေးခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်.. Lady Bird တို့ Little Women တို့ရဲ့မင်းသမီးလေး Saoirse Ronan ကို လူတစ်ကိုယ်စိတ်နှစ်ခုနဲ့ မယ်လနီအဖြစ်မြင်တွေ့ရမယ့် သိပ္ပံဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်.. လူသားဖြစ်တည်မှု.. လူသားဆန်မှု.. ချစ်ခြင်းနဲ့ စွန့်စားခန်းတွေကို လူသားတွေမျိုးသုဉ်းခါနီး အနာဂါတ်ကမ္ဘာပေါ်အခြေအတည်ပြီးကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦး..။
IMDB: 5.9/10 109,694 votes
Enemy (2013) ရုပ်ရှင် တော်တော်များများမှာ အဖက်ဖက်က ပြည့်စုံဖို့ဆိုတာ အတော်ခဲယဥ်းတဲ့ ကိစ္စ။ ခဲယဉ်းတယ် ဆိုတာထက် မရှိသလောက် ရှားတယ်လို့ ပြောရမယ်။ ကောင်းပေ့ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာတောင် မပါမဖြစ် မဟုတ်ဘဲ ပိုနေတဲ့ Scene တွေ၊ Dialogue တွေ အပြင် တမင်ကြီး ကြားကောင်းမယ့် Quote တွေ ပါနေတတ် သလိုပေါ့။ ဒါပေမယ့်လို့ ဒီဇာတ်ကားမှာကျ Scene တိုင်း၊ Dialogue တိုင်းက သူ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့သူ အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ၊ ထိထိရောက်ရောက်၊ အပိုလိုမရှိ ကွက်တိ နေရာယူထားကြတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒါရိုက်တာက ဒီဇာတ်ကားမှာ အတော်ပညာပြထားတယ်လို့ ပြောရမယ်။ "ငါဘာကောင်လဲ သိချင်ရင် ဒီကားကိုကြည့်လိုက်" ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးပေ့ါ။ သေချာကြည့်ရင် ကြည့်သလောက် ဘယ်လောက်ထိ အသေးစိတ် ဂရုစိုက်ထားတယ်ဆိုတာ တွေ့နိုင်တယ်။ (Adam ကြည့်မိတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲက ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ရဲ့ နက်ကတိုင်မှာ ပင့်ကူအိမ်‌ပုံလေး ...
IMDB: 6.9/10 162,005 votes
Sadako 3D2(2013) ဒီဇာတ္ကားေလးကေတာ့က်ြန္ေတာ့္ရဲ႕၇ကားေျမာက္ ဘာသာျပန္ကားေလးျဖစ္သလိုပထမဆံုးဘာသာျပန္တဲ႔ဂ်ပန္သရဲကားေလးလည္းျဖစ္ပါတယ္ ခင္မင္တဲ႔သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အစ္ကိုေတြကဂ်ပန္ကားေလးျပန္ပါလားလို႔ေျပာတာေၾကာင့္ျပန္ျဖစ္သြားတာ လည္းျဖစ္ပါတယ္ အမွန္တိုင္းေျပာရရင္ဒီကားေလးကိုဘာသာျပန္ရင္းကို ေတာ္ေတာ္ၾကက္သီးထမိပါတယ္အသံေတြရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ္ေတာ္မိုက္တာမို႔ဘာသာျပန္ရင္း နဲ႔ေတာင္ေနာက္တခါသရဲကားဘာသာမျပန္ေတာ့ဘူးလို႔စိတ္ကူးမိတဲ႔အထိပါပဲ ဒီဇာတ္ကားေလးဟာ ဆာဒကိိုဆိုတဲ႔သရဲမအေၾကာင္းကိုရိုက္ကူးထားတာပါ က်ြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း(ဂ်ပန္)ေျပာတာကေတာ့ဒီဇာတ္ကားရိုက္ေနရင္းကိုအႏုပညာရွင္ေတြ ဒါရိုက္တာေတြအခက္အခဲေတြ႕ခဲ႔ရပါတယ္တဲ႔ျမန္မာကားမွာဆို သက္တံ႕သစ္ကားရိုက္တုန္းကအခက္အခဲ လိုမ်ိဴ းထင္ပါတယ္ ဒီဇာတ္ကားဟာအပိုင္း၂ပါ အပိုင္း၂ကလည္းသူ႔ဇတ္လမ္းနဲ႔တူကြဲျပားတာေၾကာင္း က်ြန္ေတာ္အပိုင္း၂ကိုဘာသာျပန္ျဖစ္တာပါကဲအညြန္းေလးဖတ္လိုက္ရေအာင္ လြန္ခဲ႔ေသာ၅နစ္ကေသဆံုးသြား ျပီျဖစ္ေသာဆာဒကိုဆိုေသာသရဲမေလးထူးထူးဆန္းဆန္းပန္းခ်ီကားေလးေတြကိုဆြဲတတ္ေသာ ကေလးမေလးတစ္ေယာက္ကေလးမေလးကိုမေခ်မငံလုပ္မိသူတိုင္းအေသဆိုးနဲ႔ဘာလို႔ေသၾကတာ လဲကေလးမေလးကသရဲဝင္စားျဖစ္နိင္ပါ့မလား ေသဆံုးသြားေသာလူေတြကေကာရိုးရိုးသားသား ေသဆံုးသြားၾကတာလားေဘးပေရာဂေတြေကာပါလားေမြးကတည္းကကေလးမေလးရဲ႕မိခင္ေကာ ဘယ္ကိုေရာက္သြားလဲစသျဖင့္ဇတ္ကြက္ေလးေတြ ကပရိတ္သတ္ကိုျဖည္းျဖည္းခ်င္းဆြဲေဆာင္သြားမွာပါ ဖုန္းနဲ႔ၾကည့္ေသာသူမ်ားနားၾကပ္ထိုးျပီးၾကည့္ပါေလ computerနင့္ၾကည့္ေသာသူမ်ားမီးပိတ္ျပီးၾကည့္ ပါေသခ်ာပါတယ္သရဲကားၾကိဳက္တဲ႔ပရိတ္သတ္ေတြ စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြကိုဒီဇတ္ကားေလးကေပးမွာပါ
IMDB: 4.4/10 529 votes
The Secret Scandal (2013) ျဖစ္ရက္မွန္ဇာတ္ကားေလးတစ္ကားနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ Norigae ဆိုတဲ့ စကားလံုးက sex toy လို႔အဓိပၸာယ္​ရၿပီး​ေတာ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္​မွာထြက္​ခဲ့တဲ့ drama/thriller အမ်ိဳးအစားရုပ္​႐ွင္​ကားျဖစ္​ပါတယ္။​ ကိုရီးယား႐ုပ္​႐ွင္​ေ​လာကရဲ႕အ႐ႈပ္​အ​ေထြး​ေတြကို ႐ိုက္​ျပထားတဲ့ဇာတ္​ကားျဖစ္​ပါတယ္​။ ဇာတ္လမ္းေလးကေတာ့….သတင္​း​ေထာက္​လီဂ်န္​ဟိုက မင္​းသမီး​ေဂ်ာင္​ဂ်ီဟဲ suicude လုပ္​သြားတဲ့ကိစၥရဲ႕​ေနာက္​ကြယ္​ကအ​ေၾကာင္​း​ေတြကိုလိုက္​စံုစမ္​းရင္​း မင္​းသမီးကိုဒါ႐ိုက္​တာနဲ႔ ပ႐ိုဂ်ဴဆာတို႔ကလိင္​ပိုင္​းဆိုင္​ရာအၾကမ္​းဖက္​တဲ့အ​ေၾကာင္​း​ေတြပါ​ေပၚလာၾကၿပီး​ေတာ့ တရားရံုးမွာအမႈရင္​ဆိုင္​ရတဲ့အထိျဖစ္​လာခဲ့ပါတယ္။ ​ေငြ႐ွိရင္​ဘာမဆိုလုပ္​လို႔ရတယ္​ဆိုတဲ့အတိုင္​း ​ေငြ႐ွိတဲ့သူ​ေတြကလူပါး၀ပံု​ေတြ မင္​းသမီး​ေတြရဲ႕ လိင္​ပိုင္​းဆိုင္​ရာအၾကမ္​းဖက္​ခံရမႈ​ေတြကိုပါဒီဇာတ္​ကားမွာ​ေတြ႔ႏိုင္​ပါတယ္​။ အဲ့ဒီ့က​ေနတရားရင္​ဆိုင္​ၾကရင္​ျဖစ္​လာတဲ့အဆက္​အခဲ​ေတြ ဒီအမႈကိုႏိုင္​သြားမွာလား ႐ွံုးနိမ္​့မွာလားဆိုတာက​ေတာ့ ဒီဇာတ္​ကားထဲမွာဆက္​လက္​ၾကည္​့​ေပးၾကပါဦး ( p.s – ဒီဇာတ္​ကားက ကိုရီးယားမင္​းသမီးဂ်န္​ဂ်ာယြန္​းရဲ႕​အဆံုးစီရင္​မႈအ​ေၾကာင္​းကို႐ိုက္​ကူးထားတာျဖစ္​ပါတယ္​ ဒီဇာတ္​လမ္​းထဲကအတိုင္​းအျပင္​မွာလည္​းတကယ္​ျဖစ္​ခဲ့တာပါ မင္​းသမီးဂ်န္​ဂ်ာယြန္​းက F4 ကားထဲမွာ ဂင္​ဂ်န္​ ဒီကို၀ိုင္​းအက်င္​့မ​ေကာင္​းၾကတဲ့​ေက​်ာင္​းသူသံုး​ေယာက္ထဲက တစ္​​ေယာက္​အ​ေနနဲ႔သ႐ုပ္​​ေဆာင္​ခဲ့ဖူးပါတယ္​ )
The Flu (2013) လက္ရွိဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ၂၀၁၃ေလာက္ကထြက္ထားတဲ့Flu ေလးနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္ ။ ဇာတ္လမ္းကေတာ့ တ႐ုတ္ ဖိလစ္ပိုင္ စတဲ့မတူတဲ့ႏိုင္ငံေတြကေနကိုရီးယားကို တရားမဝင္လူကုန္ကူးတဲ့ကြန္တိန္နာေပၚကပါလာတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားလူမ်ိဳးေတြဆီမွာ H5N1ဆိုတဲ့ဗိုင္းရပ္စ္အဖ်ားပိုးပါလာခဲ့တယ္… ေတာင္ကိုရီးယားဆိပ္ကမ္းကို ကြန္တိန္နာေရာက္ရွိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုးရက္တာၾကာခဲ့ၿပီး ကိုးရက္တာအတြင္းအလုံပိတ္ကြန္တိန္နာထဲမွာရွိတဲ့အဖ်ားပိုးက ေရာဂါအညစ္အေၾကးဘာညာစတာေတြေၾကာင့္ Avian Virusဆိုတဲ့တုတ္ေကြးဗိုင္းရပ္စ္အျဖစ္သေႏၶေျပာင္းခဲ့တယ္ ၊ ႏိုင္ငံတကာမွာ H5N1 ဝက္တုတ္ေကြးစတဲ့ဗိုင္းရပ္စ္ေတြျဖစ္ၿပီး လူအေသေပ်ာက္ရွိခဲ့ေပမယ့္ ရာသီတုတ္ေကြးေလာက္သာျဖစ္ၿပီး ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ဖူးတာမ်ိဳးမရွိတဲ့ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဘူဒန္ၿမိဳ႕ကို ထိုဗိုင္းရပ္စ္ေရာက္ရွိလာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့…. ကန္ဂ်ီဂူးဆိုတဲ့ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ကဝန္ထမ္းေလးနဲ႔ ေရာဂါရွာေဖြေရးကဆရာမကင္အင္ေဟးနဲ႔သမီးျဖစ္သူ ကင္မီရီဆိုတဲ့ ဇာတ္ေကာင္ေတြနဲ႔ ဒီဇာတ္လမ္းကိုပိုအသက္ဝင္ေအာင္ပုံေဖာ္ထားပါတယ္ ။ တစ္ကယ္ၾကည့္လို႔ေကာင္းတဲ့ဇာတ္လမ္းေလးမို႔ လက္ရွိ coronaဒဏ္ကိုအံတုေနရတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႀကီးေဘးကင္းပါေစလို႔ဆုေတာင္းရင္း တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္…။
IMDB: 6.7/10 10,472 votes